Collapse OS inoshanda sisitimu. Dai apocalypse ikasakusiya usina PC | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Collapse OS inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kumhanya pamakomputa akagadzirwa kubva pazvinhu zvakashandiswazve
Iyo Collapse OS inoshanda sisitimu inoitirwa dambudziko rinotyisa. Kwete iyo dambudziko iro vamwe vanotya kushayikwa kwemvura kana hondo yenyukireya. Dambudziko randiri kutaura nezvaro ndiro rinonyanya kunetsekana isu vedu vanoda tekinoroji. Chii nekushaikwa kwezvinhu isu tinosara tisina makomputa.
1 Chii chiri chinangwa cheiyo Collapse OS inoshanda sisitimu?
2 Ah! Uye zvino ndiani achakwanisa kundidzivirira?
3 Zvinangwa zveprojekti
Chii chiri chinangwa cheiyo Collapse OS inoshanda sisitimu?
Collapse OS akaberekwa kubva mukutenda kwemunyori wayo kuti ramangwana rakaipa rakatimirira. Mumashoko ake:
Ndinovimba vedu pasi rese rekutengesa cheni rinodonha pamberi pa2030. Nekuwa uku, hatizokwanise kuburitsa mazhinji emagetsi edu nekuti zvinoenderana neyakaomarara cheni yekupa iyo yatisingakwanise kuzadzikazve kwemakumi emakore (zvachose?).
Iyo inomhanyisa mwero wekufambira mberi watakaona kubva pakuuya kwemagetsi kwakaitika pasi pemamiriro chaiwo asingazoitika mushure mekudonha, saka hatigoni kumirira kuti tibudise tekinoroji nyowani yemagetsi nekukurumidza sezvatakaita pasina yakanaka 'yekutanga kit' kutibatsira kuzviita.
Zvakare fungidzira kuti chii chichaitika kana cheni yekutengesa yadimburwa
Zvemagetsi zvinogadzira simba rakakura, simba iro ichapa zvakanakira nharaunda dzinoramba dzichitonga. Izvi zvichaunza nguva nyowani mukugadzirisazve zvemagetsi: zvikamu hazvichakwanise kugadzirwa, asi isu tine mabhirioni ezvikamu akarara akatenderedza. Avo vanobudirira gadzira matsva matsva kubva kune izvo zvidimbu nemidziyo yepasi-tekinoroji ivo vanozove vane simba kwazvo.
Pakati peizvi zvakapora zvidimbu ndiwo ma microcontroller, ayo ane simba zvakanyanya asi ivo vanoda maturusi akaomarara (kazhinji makomputa) kuvaronga. Makomputa, mushure memakumi mashoma emakore, achapunzika zvisingaite uye hatichakwanise kuronga ma microcontroller.
Ah! Uye zvino ndiani achakwanisa kundidzivirira?
Mune ino kesi haizove iyo Red Chapulín, asi Virgil Dupras, ndiani watanga tichiverenga. Mhinduro iyo Virgil inofungidzira ndeiyi inotevera:
Kuti tidzivise iyi njodzi, isu tinofanirwa kuve nehurongwa hunogona kugadzirwa kubva kununurwa zvikamu uye nema microcontroller. Isu tinodawo chizvarwa chemainjiniya kuti atitevere kuitira kuti vagadzire matsva matsva pane kugara nhaka yemamishini asingagadziriswe uye asingakwanise kuchengetedzwa.
Apa ndipo panopinda Collapse OS.
Iyi yakavhurwa sosi inoshanda sisitimu inoitirwa kuti ishandiswe pane 8-bit processor. Dupras anotsanangura chikonzero nei achivasarudza kune avo vane simba uye uye achangopfuura 32-bit ARMs.
Nei uchienda kusvika kumasere-masere michina? Kune mamwe makumi matatu nemaviri-emaARM machipisi ayo anowirirana nechingwa mabhodhi.
Kutanga, nekuti ini ndinofunga kune mamwe anodzorerwazve masere-masere machipisi kupfuura gumi nematanhatu kana makumi matatu nematatu machipisi.
Chechipiri, nekuti Iwo machipisi anozove nyore kudzokorora mufekitori mushure mekupunzika. Iyo z80 ine 9000 transistors. 9000! Kuenzaniswa nemamirioni atinayo mune chero yazvino CPU, izvo hazvisi! Kana machipisi ekutanga atinokwanisa kugadzira mushure mekupunzika aine mashoma transistor kuverenga, isu tinogona zvakare kugadzira sisitimu inoshanda nemazvo pane zvakapusa machipisi
Zvinangwa zveiyo Collapse OS chirongwa zvinotevera:
Kudonha OS Ichave ine kernel inoenderana ne z80 processors uye kuunganidzwa kwemapurogiramu, maturusi uye zvinyorwa izvo zvinokutendera iwe kuunganidza anoshanda system iyo, kana yapera, ichakwanisa kuita zvinotevera.
Unoshanda nemashini mashoma uye akagadziridzwa.
Bata kuburikidza nenzira dzakagadziriswa (serial, keyboard, kuratidza).
Rongedza mafaira emavara.
Unganidza inosanganisa sosi mafaira emhando dzakasiyana dzeMCUs nemaCPU.
Verenga uye nyora uye uye kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekuchengetedza.
Dzokorora iwe pachako.
Pakupedzisira, chinangwa cheichi chirongwa ndechekuzvimiririra sezvazvinogona. Nekopi yeiyi purojekiti, anokwanisa uye munhu wekugadzira iwe unofanirwa kukwanisa kuvaka nekuisa Collapse OS pasina zvekunze zviwanikwa (kureva Internet) mumushini wedhizaini yake, yakavakwa kubva kuzvikamu zvakawanikwazve neepasi-tech maturusi.
Handina zano kana dambudziko richaitika, asi sekutaura kwaVirgil
… Iyi pfungwa inoita senge ine simba kwazvo kuti irege kuzadzikiswa. Uye kunyangwe kana zvisina basa, kunakidzwa kwakawanda kuyedza.
Kana iwe uchida kutora chikamu muchirongwa iwe unogona kuzviita paGitHub. Iwe unogona zvakare kuwana pano rumwe ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Collapse OS inoshanda sisitimu. Usapererwe nekombuta kana apocalypse yarova
Mario rogodinki akadaro
Ini ndinobvumirana nechinangwa chechirongwa. Zvinoratidzika kwandiri kunge zvakabatana uye kuti haina kupeputswa nemusoro. Chero zvodii zvingave zvinonakidza, zvinonakidza uye nei zvisingaite, ZVINOBATSIRA ... !!!
Pindura kuna Mario Rogodinki
Rudzi rweprojekti ndirwo rwatinoda. Uye kwete yenzvimbo yeIT chete, asi yenzvimbo dzakasiyana dzehupenyu hwezuva nezuva. Zano B mune zvirevo / kudonha,
Uye nei usingashande pamwe mukuzadzisa bios yakavhurika kutsiva izvo mamaboardboard anobva kufekitori, kana kuri kwekutya kweahardware kumashure madhoo, bios yakavhurika ingave mhinduro kune skynet iri kuuya.
Maseneta eUS vachipesana neYouTube yekuve "chimwe chezvishandiso zvekufarira zvekuRussia"